တိုင်းရင်းသားဟင်းလျာများ | Danuphyu Daw Saw Yee (London) | Page 2
ကျမ အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားဟင်းတို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နေရာဒေသတခုရဲ့ အစားအသောက်များကို ရေးသားပြီ ဆိုရင်အလွန်သတိထားပါတယ်ရှင် အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ ဒေသစားရိုးရာစာများရဲ့ မူရင်းနည်းများကို မပျက်စီးရလေအောင် အထူးစီမံရပါတယ်။ Classic Dishes များဖြစ်တဲ့အလျောက် အဲဒီ ဟင်းတမျိုးရဲ့နံမည်တပ်ပြီ အသုံးပြုပြီဆိုရင် ကိုယ်ထင်ရာ လျှောက်လုပ်လို့မရပဲ နေရာဒေသ အခက်အခဲကြောင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲရပြီဆိုရင်တောင် အနီးစပ်ဆုံးကို သုံးပေးပါတယ်။ ပြောင်းလဲထားကြောင်းကိုလဲ အသိပေး ရေးသားရပါမယ်။ သူတို့ဒေသ တိုင်းရင်းသားများ ဒေသခံလူများ နဲ့ တိုင်ပင် သင်ယူပြီးမှ ရေးတာမို့ ကျမ ကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးထား အလေးနက်ထားပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ဒေသတခု နဲ့ တခု ဖလှယ်ရာလဲ ရောက်တာမို့ အလွန်အသုံးဝင်မယ်လို့ မျော်လင့်မိပါတယ်
ကျမရဲ့ ရင်နှီးချစ်ခင်ရပါသော ပြင်သစ်က ရှမ်းမလေး လင်းပေးတဲ့နည်းလေးပါရှင်။ အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ရှမ်းသွေး ပါတဲ့ကျမအမျိုးသား ( ထင်လဲမထင်ရဘူးနော် ) ကအဲဒီ တိုဖူးဝက်သားလေးကို တထိုင်တည်းနဲ့ ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီး စားပလိုက်ပါတယ်ရှင်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဒီနည်းလွယ်လွယ်လေးကို ကြည့်ရအောင်
-၀က်သားအဆီနဲနဲပါတာ တောက်၂စင်း ၃၀၀ ဂရမ်
-တိုဖူးဖြူတုံး ၂၀၀ ဂရမ်
-ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ရှမ်းနံနံပင် ၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ ပင်စိမ်းရွက် (လက်တဆုပ်မရှိတရှိစီ)
-ကြက်သွန်ုဖြူ ၃မွှာ ထောင်းထား
ဝက်သားအဆီပါတာကို နုတ်နုတ်စင်းထားပါ။ တိုဖူးလေးများကိုလဲ တောက်တောက်စင်းထားပေးပါ။
ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ရှမ်းနံနံပင် ၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ ပင်စိမ်းရွက် ၊ငရုတ်သီး အရွက်စုံတွေကို နုတ်နုတ်စင်း ပြီး ဇလုံတခုထဲထဲ့ ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံး ကို ပုံကာထဲ့ပြီး ဆား ဟင်းခတ်မုံ့ ဆီရွှဲရွှဲထဲ့ကာ နယ် ငှက်ပျောဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး ၄၅မိနစ်ခန့်ပေါင်းပေးပါ။
ပြီးမှ ၁၀မိနစ်ခန့်ကင်လိုက်ရင်း စားလို့အလွန်ကောင်းပြီး မွှေးနေသော
၀က်သားတိုဖူးဖြူပေါင်းကင် ရပြီပေါ့နော်။ (ကျမကတော့ တထုတ်ပဲကြီးကြီးထုတ်လိုက်ပါတယ် ၊ အထုတ် သေးလေးတွေထုတ်ချင်လဲရပါတယ်)
ရုံးပတီးသနပ်လို့ ရခိုင်လူမျိုးများက ခေါ်ဝေါကြတယ်လို့ သိရပါတယ်ရှင်။ ကျမ ရဲ့ အကြိုက်ပဲ ဆိုပါစို့။ ကျမတို့ မြန်မာဟင်း နှပ်စားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ချိုချိုချဉ်ချဉ် အလွန်စားကောင်းပါတယ်။ အထူးအဆန်းလေး နဲ့ စားကောင်းတာမို့ မေးမြန်းရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
-ရုံးပတီသီး ၂၀ တောင့်ခန့်
-ရှာလကာရည် ၂ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း)
-သကြား ၁ဇွန်း (စားပွဲတင်)
-ပုဇွန်ခြောက် ကြိတ်ပြီးသား ၃ဇွန်း (စားပွဲတင်)
-ကြက်သွန်နီ အနေတော် ၂လုံး
-ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ၁ဇွန်း (စားပွဲတင်)
-ဆား ၁ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
ရုံးပတီသီးနုနုများကို အညှာကိုဖြတ်ထုတ်ထားကာ လေးစိတ်စိတ်ထားပေးပါ။ စိတ်တဲ့အခါမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မပြတ်အောင်စိတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အတောင့်လိုက်လေးတွေ ဒယ်ထဲကိုစီထဲ့ပြီး ရှာလကာရည်၊ ဆားအနဲငယ်၊ သကြား ထဲ့ ရေအနဲငယ် ထဲ့ပြီး နွမ်းလာတဲ့အထိအဖုံးအုပ် တည်ပေးထားပါ။( နူးပြဲ မသွားခင်) နွမ်းသွားရင် မီးပိတ်လိုက်ပါ။
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူကို ပါးပါးလှီးပြီး သေးသေးလေးများဖြစ်အောင်ပြန် လှီးထားပါ။
နောက်ဒယ်တလုံးထဲမှာ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်များဖြင့် ဆနွမ်းထဲ့ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်ထဲ့ပြီးဆီသတ်ပေးပါ။ ကြက်သွန်ကျွတ်လာပြီဆိုရင်ပုဇွန်ခြောက်များ ထဲ့ပါ။ ငပိကို ရေဖျော်ထားပြီး ရောမွှေပေးပါ။ ဆား ထဲ့ပေးပါ။ ဆီပြန်လာပြီဆိုရင် ရုံးပတီးသီးများကိုရောပြီး အရသာဝင်အောင် ၁မိနစ်ခန့်လှိမ့်ပြီးမီးပိတ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ နှမ်းလှော်မွှေးမွှေးလေးဖြူးပေးပြီး သူ့အပေါ်ကနေ ကြက်သွန်ကြော် ကျွတ်ကျွတ်လေးများ ထပ်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။
ရခိုင်ရိုးရာရုံးပတီးသနပ်ချိုချဉ်စပ်မွှေး လေး ရပါပြီ။ ဒီနည်းလေးမှာ အရေးကြီးတာက ရုံးပတီးသီး လေးများက နုနုလေးများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ စားရင်လဲ တတောင့်လုံး ကိုပါးစပ်ထဲ ထဲ့လိုက်ပြီး စားတာပါတဲ့နော်။
ဒီကချင်ထမင်းထောင်းလေးကို Fingerfood Garden ပိုင်ရှင်ညီမက
ကျွန်မကိုသင် ပေးတာပါ။ စားလို့လည်းကောင်းပြီး
တန်ဖိုးထားစရာ ရိုးရာအစားအစာဖြစ်လို့ မခြွင်းမချန်ဘဲပြောပြတဲ့ ညီမကို
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ လွယ်ကူပြီး စားကောင်းတဲ့
ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ထမင်းထောင်းလေး ဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်ရအောင် . . . ။
• ဆတ်သားခြောက် – အနည်းငယ်
• ထမင်း – ၁ ပွဲစာ
• ကြက်သွန်ဖြူ – ၁ တောင့်
• ငရုတ်သီးစိမ်း – ၂ တောင့်
• ပဲပုပ်ခြောက် – အနည်းငယ်
• သံပရာသီး – ၁ စိတ်
• ဆား – အနည်းငယ်
• အရသာမှုန့် – အချိုဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ပင်စိမ်း၊ နံနံပင်
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို ကြေညက်နေအောင်ထောင်းထားပြီး ဆတ်သား ခြောက်လေးများပါ ရော ထောင်းပါ။ ညက်နေပါစေ။
နံနံပင်၊ ဖက်ဖယ်ရွက်၊ ပင်စိမ်းတို့ကို ရောထောင်းပြီး ညက်ပြီဆိုရင် ထမင်း၊ ပဲပုပ်ခြောက်တို့ကို ထပ်ထည့်ကာ ထောင်းပေးပါ။
အရသာမှုန့်၊ ဆားတို့ကိုကိုရောပါ။ သံပရာ ရည်ကို ၁ ဇွန်းခန့်ထည့်ပြီး ထမင်းဆုပ်လုံးလေးများ လက် တစ်ဆုပ်စာစီ လုံးပါ။ ဂျူးမြစ်၊
သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ဖြင့် တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
ပဲထွန်ဆေးခါးဟင်းချို (အင်းလေး- ရှမ်း) ပဲထွန်ဆေးခါးဟင်းချိုတခွက်ကိုချက်ဖို့ ကျမမှာ ဟိုလူကယ်ပါ ဒီလူကယ်ပါနဲ့ပေါ့။ မစုမိ နဲ့ လင်းက နည်းပေးတယ်။ ရန်ကုန်ကမမီးကို လှမ်းပြီး ဒုက္ခပေးရှာခိုင်းရတယ်။ အဲဒီလို လူအမျိုးမျိုးကို နှိပ်စက်ပြီးသကာလ ပဲထွန် ဆေးခါးစတာတွေလက်ထဲရောက်လာတော့ ကျမဒီ ရှမ်းရိုးရာဟင်းချိုကို လူအများကောင်းစားဖို့( သူတို့ ၃ယောက်ကို ဒုက္ခပေးရကျိုးနပ်သွားအောင်) စချက်ပါတော့မယ်ရှင်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ( ၂ယောက်စာ )
-ဆနွမ်း အနဲငယ် ပါလေကာ
-ဂျင်း ထောင်းပြီးသား ၂ဇွန်းစာ(အချိုဇွန်း)
-ကြက်သွန်ဖြူ ၃ မွှာ
-အရသာမှုန့် ၁ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
-ဆေးခါးမှုန့် ( လိုသလောက်အခါးသောက်နိုင်သလောက် အနဲငယ်)
ပဲထွန်ကို နူးအောင် ပြုတ်ပြီး ဆယ်ကာ ထောင်းထားပါ။ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး ဆီပါလေကာ အိုးထဲ ထဲ့ပြီး ဆနွမ်းထဲ့ဆီသတ်ပါ။ ပြီးမှ ထောင်းထားသောပဲများထဲ့ကာ ရေ ၇၅၀ မီလီလောက် ( ဟင်းချိုခွက် ၂လုံးစာ) ထဲ့ကာပွက်ပါစေ။ ဆား၊ အရသာမှုန့်တို့ ဟင်းရည်အိုးထဲ ထဲ့ရပါမယ်။ ပဲထွန်ဆေးခါးဟင်းရည်က ဂျင်းများများ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းများများ အဓိကပါ။ ကြက်သွန်နီကို ထဲ့လိုက ထဲ့နိုင်ပါတယ်။
ပွက်လာပြီး အပျစ်အကျဲအနေတော်ရင် နောက်ဆုံးမှာ အရသာ မြည်းပြီး ဆေးခါးမှုန့်ကို အခါးသောက်နိုင်တာပေါ်မူတည်ပြီး ထဲ့ပေးကာ ပူပူလေးသုံးဆောင်ရန် ရှမ်းဟင်းချိုတခွက်ရပါပြီ။ သတ်သတ်လွတ်မဟုတ်တဲ့ဟင်းချိုလိုချင်ရင်တော့ ငါးနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်။ ပဲထွန်ဟင်းရည်ကို ငါးနဲ့လဲ ချက်စားပါတယ်။ ငါးနဲ့ချက်ရင်တော့ ငါးနဲ့ ပဲထွန်ပေါင်းပြုတ်ပြီး နူးရင် ပဲထွန်ကိုလဲ ထောင်း ငါးကိုလဲ အရိုးနွင်ပြီးထောင်းပါ။ ထောင်းပြီးငါးကို ဆား ၊ အရသာမှုန့်နဲ့ နယ်ပြီး ဂျင်း၊ ကြက်သွန်များဆီသတ်ပြီးဟင်းရည်အိုးထဲပြန်ထဲ့ရပါမယ် ။ရေထဲ့ပြီး ရေပွက်လာရင် နောက်ဆုံးမှာ အရသာ မြည်းပြီး ဆေးခါးမှုန့်ကို အခါးသောက်နိုင်တာပေါ်မူတည်ပြီး ထဲ့ပေးပါ။
ကျမ ကိုဒီနည်းလေးပေးတဲ့ ကချင်မလေးက မြေနီကုန်း ရှမ်းကုန်းလမ်းထဲက Fingers Foodgarden ဆိုင်ပိုင်ရှင်ချောချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမက သူ့ကို ကချင်ဟင်းလေးတွေ ရေးချင်ကြောင်း အကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာ သူမလေးက ကျမကို ညတွင်းချင်း ကချင်ရိုးရာ နည်းလေးတွေကိုရေးပေးရှာပါတယ်။ ကျမအချိန်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်ကို မိုးချုပ်နေပါပြီ။ စိတ်ရင်းကောင်းပြီး ကူညီတတ်သူလေးဆိုတာ ချက်ချင်းသိလိုက်ပြီး ကျမ အလွန်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကချင်ရိုးရာ အစားအစာများကို အားပေးချင်ရင်တော့သူကလေး ဆိုင်ကလေးက စေတနာပါပိုထဲ့ပေးမဲ့ဆိုင်ကလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် လို့သတင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီ ကြက်ဥထောင်းလေးကို ကျမရော အမျိုးသားရော အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ခံတွင်းအလွန်တွေ့တဲ့ အစားအစာလေးပါရှင်။ လုပ်ရတာလဲ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ကြည့်ရအောင်
-နံနံပင် ၅ ဂရမ်(လက်တဆုပ်စာ)
-ဖက်ဖယ်ရွက် ( မရှိရင်ပင်စိမ်းသုံးပါ) အနဲငယ် Vietnam corriander
-အရသာမှုန့်၁ ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
ကြက်ဥလေးတွေကို ပြုတ်ထားပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျမကြက်ဥပြုတ်တဲ့အခါတိုင်း အနှစ်အလွန်ကျက်အောင်မပြုတ်ပဲ အနှစ်ရဲရဲလေး ခပ်ပျော့ပျော့အနေမှာထားပါတယ်။ အဲဒါမျိုးလိုချင်ရင် ရေနွေးအိုးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပါ။ ဗီနီဂါ ၃ – ၄ စက် ထဲ့ပါ။ ကြက်ဥကိုရေနွေးပွက်မှ ထဲ့ပါ။ ထဲ့တဲ့အချိန်ကနေ ၇မိနစ် အကြာပြုတ်ပါ။ ပြီးရင် ရေအေးအေးထဲကို ချက်ချင်းစိမ်ပါ။ ကြက်ဥလေးတွေ အေးပြီးဆိုရင် အခွံကို ခွါတဲ့အခါလွယ်လွယ်ကူကူ ခွါလို့ရနေပါမယ်နော်။
ပြီးရင်အကာကိုသပ်သပ် ဖယ် ပြီး ခပ် သေး သေး လှီး အနှစ်ကို သပ် သပ် ဖယ် ထားပေးပါ။
ဆုံထဲမှာ ဂျင်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူဥကို ညက်အောင်ထောင်းပေးပါ။ နံနံပင်၊ ဖက်ဖယ်ရွက် ကိုပါထည့်ပြီး ထောင်းပါ။
ဆား အနည်း ငယ် ထည့်ပါ။ပြီးမှ ကြက် ဥ အကာ ကို ထည့်ပြီး ထောင်းပါ။ အရသာမှုန့်ထဲ့ပေးပါ။ ဇွန်းလေး ၁ ချောင်းဖြင့် မွှေလိုက် အနဲငယ် ထောင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။
ပြီး မှ အနှစ် ကို ထည့် ထောင်းပြီး။ ဆီစိမ်း နည်းနည်း လေး ထည့် ပေး ဆီဖုံး တဝက် စာခန့်ထဲ့ပေးပါ။
နောက်ဆုံးမှာ သံပုရာ သီး နဲနဲညှစ်ပေးပြီးအရသာရှိရှိ စိမ့်ပြီး စပ်သော ကချင်ကြက်ဥထောင်းလေးရပါပြီ။
ကျမအလွန်နှစ်သက်သော ဒီဝက်သားမုံညင်းချဉ်ကြော်ကို ရန်ကုန်က ရှမ်းဆိုင်တွေမှာအမြဲစားလေ့ရှိတဲ့ ဟင်းပါ။ ဒီဟင်းလေကိုလဲ ပြင်သစ်က ရှမ်းမလေး လင်းကပြောပေးပါတယ်ရှင်. လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်။ ဝက်သားအသားအစား ကြက်သားကိုလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
-ဝက်သားတောက်တောက်စင်းအသား ၂၅၀ ဂရမ်
-မုန်ညင်းချဉ် ၁၀၀ ဂရမ်
မုံညင်းချဉ်ကို စင်းထားပေးပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးတလုံးလဲ စင်းထားပါ။ .အသားကို ဆား၊ အရသာမှုန့် ၊ ငရုတ်ကောင်းအနဲငယ် ထဲ့နယ်ထားပေးပါ။ အသားကို ဆီအိုးတယ်ကာ ထဲ့ကြော်ပါ။ အသားကျက်ရင် မုံညင်းချဉ်ထဲ့ပေးပါ။
ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးထဲ့ ပါ။ ဆား၊ အရသာမှုန့် လိုသလိုထပ်ထဲ့ရုံဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနေရရင် စားဖို့ အသင်ရပါပြီ ၊ ဆီရွှဲလေ ပိုစားကောင်းလေလို့ သိရပါတယ်။ ရှမ်းဆန်ထမင်း ပူပူလေးဖြင့်အလွန်စားကောင်း မှာသေချာ ပါတယ် ရှင်။
ကျမက အစပ်ကြိုက်သူဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ ငရုတ်သီးစိမ်းတတောင့် ပါးပါးညှပ်ပြီးထဲ့ လိုက်ပါတယ်၊ ရှမ်းနံနံ နှစ်ပင်ကိုလဲ အနေတော်ဖြတ်ထဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးက မပါလဲရပါတယ်နော်
ဒီဟင်းလေးက မွန်ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ချက်ပြပေးပါမယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ကျမဖတ်ဖူးတဲ့ ဗမာလူငယ်ကဏ္ဍ ကနည်းလေးကိုအသုံးပြုပါတယ်ရှင်။ မူရင်းရေးသားသူကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီနေရာကပြောပါရစေနော်။ မွန်ရိုးရာအတိုင်း ငပိရယ်၊ မရမ်းသီးရယ်ကတော့ မပါမဖြစ်ပါ။ မရမ်းသီးမရနိုင်ရင် မကျည်းသီးကို သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီမှာတော့ကျမက ကြာရိုးကိုသန့်စင်ပြီးသား ပုလင်းလေးတွေနဲ့ရပါတယ်။ ရိုးရိုးကြာရိုးကိုခူးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကြာရိုးခွံလေးတွေကို ဓားလေးနဲ့ခြစ်ပြီးခွါပေးရပါမယ်နော်။ အနေတော်လှီးဖြတ်ထားပေါ့။ သန့်စင်ပြီး ဟင်းခါးအဖြစ်သက်သက်လဲချက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ငါးကိုတော့အရိုးနဲ အသားများတဲ့ ငါး မည်သည့်ငါးကိုမဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျမက ငါးမြင်းကိုသုံးပါတယ်ရှင်။
ဒီဟင်းလေးဟာ ချိုချိုချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ထမင်းမြိန်စေမဲ့ သောက်ဆမ်းချဉ်ရည်ဟင်းလေးတခွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တိုင်းရင်းသားဟင်းတွေဟာ ဆီနဲနဲလေးပါလေကာချက်တာမို့ ကျန်းမာရေးနဲ့အလွန်ညီမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ မွန်မလေးတွေဒါကြောင့် လှတာနေမှာ။ တော်နေကြာအမချက်တဲ့ဟင်းက ဟုတ်လဲဟုတ်ဘူးပြောမှာစိုးလို့။
-ငါး ၂၃၀ ဂရမ် (၁၅ကျပ်သားခန့်)
-ငရုတ်သီး အတောင့် ၁၀တောင့်( အလွန်မစပ်သော ငရုတ်သီးလေးများကို အတောင့်၂၀ခန့်ထဲ့ပါ)
-ငပိ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဝက်
-မရမ်းသီး ၄လုံး (ကျမက အခြောက်ကိုသုံးပါတယ်)(မလွယ်ရင် မကျည်းရည်သုံးပါ)
-ကြက်သွန်နီ ၁လုံး (ကြီး)
-အရသာမှုန့် ၃ဇွန်း( စားပွဲတင်)
ငါးကိုအနေတော်တုံးပြီး ဆနွမ်း၊ ဆား ၊ အရသာမှုန့် ၁ဇွန်းတို့ဖြင့်နယ်ထားပါ။
ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီး၊ မရမ်းသီးတို့ကို ညက်နေအောင်ထောင်းထားပေးပါ။ တည်မဲ့အိုးထဲမှာ ငါး၊ ကြက်သွန်ထောင်းတာများ၊ ကြာရိုးများ၊ ဆား ၊ အရသာမှုန့်၊ငပိ တို့ထဲ့ပြီး နှံ့သွားအောင်ရောမွှေပေးပါ။ ဆီကိုတော့ပါလေကာပဲ ထဲ့ပါတယ်။ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းလောက်ပေါ့။
ပြီးရင် ရေ ၁လီတာခန့်ထဲ့ပြီး မီးဖိုပေါ်ပွက်လာအောင်တည်ပေးပါ။ ဟင်းကိုပွက်ပွက်ဆူလာက ရေကိုထပ်ဖြည့်ရင်း ကြာရိုးနဲ့ ငါးများနူးတဲ့အထိ တည်ပါ။
အရသာအချဉ်အပေါ့အငံမြည်းပြီး နောက်ဆုံးမှာ ရှမ်းနံနံအုပ်ကာ အဆင်သင့်စားသုံးနိုင်ပါပြီရှင်။